Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Me'ee Bokkoo Oromoo Gujii Seenaa Gababaa Oromoo
Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga diqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Sabi Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay’ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Akka Qo’annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay’nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32.1% qabata. Har’a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama.
Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraay, kibbaan hanga Keeniyaa faffaca’ee argama. Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. Akkaataan lafa, aadaa fi afaan isaa Oromoo Afrikaa keessa dabre immoo addunyaa keessatti akka beekamtu isa godheera. Qo’annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981).
Oromoo Saba “Pastoralist/nomadic” fi “semi-agriculturalist” jedhaman keessaa akka dhufe amanama. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda, ummanni Oromoo gara Kaabaatti (kaaba Oromiyaa ammaatti)babal’atan. Abbaan amantii “Baahiree” jedhamu akka bara 1593tti barreessetti jajjabeenya Oromoon yeroo sunitti qabu cimaa akka ture ibseera. Bahrey itti aanee Oromoon akka gara kaaba-dhihaatti gara Arsii, Shawaa, Wallagga fi Goojjam akkasumas gara kaaba-bahaan gara Harargee fi Walloo akka fafaca’e ibseera. Harold G. Marcus akka jedhetti kaabi-dhihaa Boorana akka bakki Oromoon duran qubate akka ta’e ibseera. Jaarraa 17 jalqabee Oromoon Amaara irraa gargar bahuu jalqaban. Haa ta’u malee, Oromoon bulchiinsa Itoophiyaa bara suni keessatti bakka argachuu jalqabde. Keessattuu Emperor Iyoas 1ffaan (1730-55) Oromoota saba haadha isaa ta’an ofitti dhiheessuu jalqabe. Akkasumas waltajjii Gondar keessatti Afaan Oromoo akka dubbatamu taasise. Bara “Zemene Mesafinti” keessatti dhaloota Oromoo kan ta’an Yejjuun bara dheeraaf waraanaan Imperoota Itoophiyaa dursaa turan. Akkasumas Begemder, Enderases jalatti qoodamuu jalqaban. Yejjuunis Raas Alii 1ffaa jala bulaa ture, haa ta’u malee, bara dheeraan duuba Tewodiroos 1ffaan Raas Alii 1ffaa injifate. Ta’us, ammallee Impereronni Itoophiyaa waan dadhabaniif waraanni Yejjuu Itoophiyaa keessaa tokkoffaa ture.
Oromoonni bara sunnitti beekkamoo turan keessaa 1. Bulchituu Menen kan Wollo, kan bara 1800 Empress taate. 2. Ras Mohaammad kan Wollo, kan Raas Mikaa’el ta’e, achiin bulchiinsa Sion. 3. Bulchituu Menen kan Ambaassel, kan haadha manaa Hayila Sillaasee taate.
Humnaa fi maatii imperiyaalaa wajjin walitti qabamuf jecha ummatni Oromoo hedduun Kiristaanummaatti jijjiiramanii turan. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti, Emperor Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akka Kiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Kun immoo gosa Oromoo lafa warra dhiisan akka gara kibbaatti godaanan warra godhee ture. Bulchaan Oromoo Mohaammad maqaa jijjiratee Abbaa lafaa Mikaa’el jedhame, niitii erga fuudhee booda abbaa Emperor Iyyaasuu 4ffaa ta’e.
jalqaba waliti aanu
Ummani Oromoo bakka kudha lamatti adda bahan. Bakka dhiha baha irra eegalee hanga bahaatti tuutnitun:
Ummani Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun naannawa bishaanii jiraatan;
Oromoo Maccaa, Laga Dhidheessaa fi laga Oomoogidduu, kibba laga Gibee jiraatu.
Oromoo Tuulamaa, Handhuura Oromiyaa naannoo Finfinneejiraatu;
The Oromoo Walloo, gara Kaabaa naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa Oromia Zone, naannoo Hara Ashangee, jiraatu; Oromoo Raayyaafi Yejjuu Oromoo jedhamu
The Ittu Oromo, who live in the Oromia Region from the Laga Hawaas guddaa fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawajiraatu;
The Oromoo Anniyyaa , kibba warra Ituu fi dhiha Laga Erer jiraatu;
The Ala Oromoo,magaalaa Hararfi laga Erer River dhihatti, warra Ituu fi Anniyyaa gidduu jiraatu;
The Nole Oromo, magaalaa Dirree Dhawaa bahatti kaaba magaalaa Harar;
The Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup,
The Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti;
The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu.
The Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu.
The Warra Qaalluu, laga Hawaas Awash River fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawa gidduu jiraatu.
The Oromoo Gujii, who are the southern part subgroup of the Oromo, inhabiting neighboring the Borena Oromo.
Posted by Hasan Ismail at 4:45 PM